Q1: Iwe uri mugadziri?
Ehe, isu tiri ISO9001 setifiketi mugadziri kwemakore makumi maviri nematatu.
Q2: Ungavimbisa sei kunaka kwako?
Tine seti yakazara yemidziyo yekuyedza inosanganisira SHIMADZU HPLC, Laser Particle SizeAnalyzer, SHIMADZU Inooneka Spectrophotometers, Whiteness tester, Moisture Analyzeruye TGA midziyo nezvimwe. Kutakurwa kwega kwega kuchayedzwa uye sampuli dzakachengetwa kuti dzitariswechinangwa.
Q3: Iwe une chero chitupa chezvigadzirwa zvako?
Hongu, zvigadzirwa zvedu zvikuru seOB, OB-1 uye CBS-X zvakafukidzwa neEU REACH, Turkey KKDIK, Korea K-REACH.Uye isu tiri ISO9001 yakatenderwa fekitori.
Q4: Zvakadini nenguva yako yekutungamira?
Isu tine stock ye30-50MT yezvigadzirwa zvedu zvenguva dzose uye tinogona kutumira kubva kukambani yedu mumazuva mashanu-7 mushure mekubhadhara kwako.
Q5: Unogona here kupa rubatsiro rwehunyanzvi?
Ehe, mainjiniya edu akadzidziswa uye ane ruzivo angada kutsigira chero nguva yauine mibvunzo nezve optical blighteners.
© Copyright 20102021 : Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa.	Optical Brightener 52 Shandong Subang Subang Chemcial Ranipal WG Fluorescent Brightener SWN Optical Brightening Agents >